Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Gumeysiga Ethiopia oo Kufsiga & Bahdilida haweenka u adeegsada Ladagaalanka Shacabka Ogadeniya
Ciidamada Gumeysiga Ethiopia oo Kufsiga & Bahdilida haweenka u adeegsada Ladagaalanka Shacabka Ogadeniya
Wararka Ogaden News Agency ay kasoo arruurisay 30 maalmood ee u danbeyay tacidyadi gumeysiga Ethiopia ka geysteen dhulka Ogadeniya waxaa kamid ah kufsi ay ciidamada nacabka gumeysiga Ethiopia u geysteen labo gabdho0d. Kufisgan oo ka dhacay deegaanka Qabridahar 03/06/2013 iyo 21/05/2013.
Ciidamada gumeysiga Ethiopia ayaa kufsiga u adeegsada bahdilid iyo nooca daran ee ciqaabta si loo qabjabiyo bulshada Ogadeniya ee daggaalka adag kula jirta sidii heeryada gumeysiga la isaga qaadi lahaa.
Farax Yusuf Dayib iyo Nimco Cabdi Soog ayaa kamid ah gabdhihii u danbeeyay ee ciidamada gumeysiga Ethiopia kula kacaan kufsiga. gumeysiga Ethiopia ayaa kufsiga u isticmaala nooc kamid ah daggaalka ay kula jiraan shacabka Ogadeniya.
Qaramada Midowday ee United Nations ayaa dhowaan soosaartay qeeraar sheegaya dowladaha u adeegsada kufsiga nooc kamid ah la daggaalanka bulsho si qowmiyad loo cabsi galiyo ama loo maquuniyo ama dhulkooda laga ceydhiyo ama xoog looga qaatoba in wadankaas loo tixgalin doono innuu khatar ku yahay amniga aduunweynaha islamarkaasna lagu qaadayo xeerka dambiyada daggaal ee ka dhanka ah xuquuqda bani aadamka.
Gumeysiga Ethiopia ayaa aaminsan in haweenku ay bulshada somalida Ogadeniya ka taaganyihiin heerka u sareeya ee sumcadooda iyo sharaftooduba ku tiirsantahay. Sidaas awgeed waxaa amar lagu siiyay ciidamada nacabka Gumeysiga Ethiopia inay falal kufsiyeed kula kacaan haweenka somlida Ogadeniya. Hadii haweenka ay kufsadaan waxay aaminsanyihiin inay ciqaabeen ragga islamarkaasna ay burburiyeen midnimadi mujtamici beelaha.